I-Gulfview #310~Izipesheli Zasehlobo~Izinyathelo Eziya Ogwini! - I-Airbnb
I-Gulfview #310~Izipesheli Zasehlobo~Izinyathelo Eziya Ogwini!
Le condo ethuthukisiwe, esezingeni eliphezulu inakho konke okudingayo ukuze ube neholide elihle! Izici eziningi zale yunithi ziyihlukanisa kwezinye ezakhiweni, okubandakanya ikhishi elivuselelwe elineziqongo ze-granite counter, kanye neshawa yokuhamba elungiswe kabusha ngokuphelele. Le condo ine-washer yayo yangasese nesomisi.
Igumbi lokulala eliphakeme lithuthukisiwe ngombhede omusha waseCalifornia King! I-condo ingalala ngokunethezeka okungu-6, inamabhedi amahholo angamawele kanye nosofa wokulala wezingane. Ikhishi eligcwele ngokugcwele linebha yasekuseni netafula lokudlela ukuze wonke umndeni udle ngesikhathi esisodwa. Nethezeka kwelinye lamachibi omphakathi amabili kanye nobhavu oshisayo ngaphandle nje komnyango wangaphambili waleli fulethi eliwumqansa, ubheke isihlabathi esimhlophe qwa e-Miramar Beach. Maduze nje ukusuka emphemeni obanzi we-pool kunendawo yokosa umphakathi. Amanzi aluhlaza esimaradi awela ngqo kumgwaqo wethu osogwini olungele abahamba ngezinyawo, izinyathelo nje ukusuka lapho! Izindawo zokudlela ezimbalwa zingaphakathi kwebanga lokuhamba ukuya e-condo futhi ukuthenga kwe-premium kuseduze nekhona.
Le ndlu enhle ine-balcony eseceleni enokubukwa kolwandle ukuze ujabulele ikhofi yasekuseni noma i-cocktail yakusihlwa. Igalofu iseduze kulabo okufanele badlale! Yenza i-Gulfview II #310 ibe iholide oya kuyo, futhi uthathe izinkumbulo zasekhaya ukuze uhlale impilo yakho yonke!
4.69 · 87 okushiwo abanye